पद मिल्नेलाई जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी छ समूह मिल्दैन – Health Post Nepal
पद मिल्नेलाई जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी छ समूह मिल्दैन
२०७५ मंसिर २८ गते ८:४१
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क नराख्ने अस्पताललाई कारबाही हुन्छ : मन्त्रालय
बिस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ‘२०७७’ जारी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– तत्काल स्वास्थ्यकर्मीको कासमू विवरण पठाउनु
सुरु भयो १२ सय स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण प्रक्रिया, कहाँ–कहाँ बन्दै छन् ?
तीन महिनामा १ हजार ५५ जनाको नमुना परिक्षण, आज मात्रै ८७ जना आइसोलेसनमा भर्ना
पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका एघारौँ तहका चिकित्सक डा. विकास लामिछानेले केही समयअघि पदबाट राजीनामा दिए । साडे ३ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन भएका डा. लामिछानेले करिडोर कुरेर कति दिन बस्नु भन्दै पद छाडे । तर, थुप्रै प्रथम श्रेणीका स्वास्थ्य अधिकारीलाई फाजिलमा राखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेसँगै मन्त्रालयले समूहअनुसार व्यवस्थापन गर्ने तदारुकता सुरु गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले समूह नमिलेका जिम्मेवारीको रेकर्ड तयार गर्न भनेपछि कर्मचारी प्रशासन महाशाखले होमवर्क सुरु गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यसचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका केदारबहादुर अधिकारीले समेत यस विषयमा मन्त्रीसँग कुरा राख्ने भन्दै विवरण दुरुस्त राख्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई निर्देशक दिएका छन् । स्रोतका अनुसार महाशाखाले जिम्मेवारीविहीन (फाजिलका) सहसचिवसरहका कर्मचारीसहित जिम्मेवारी नमिलेका समूह र व्यक्तिको सूचीसमेत तयार पारिसकेको छ ।
ती अधिकारीहरूको व्यवस्थापनका विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार भएको र मन्त्री नेपाल फर्किनासाथ पेस गर्ने तयारी भइरहेको महाशाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिवको व्यवस्थापन अहिलेकै संगठन संरचनाअनुसार सहज भने छैन ।
कुन समूहका को–को कामविहीन
मन्त्रालयका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका जनस्वास्थ्य अधिकृत फाजिलमा छन् । जसमा दिनेश चापागाईं, खिमबहादुर खड्का, रमेश अधिकारी, हरिशचन्द्र साह, चन्द्रदेव मेहता छन् । सो समूहका सहसचिवलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले नयाँ संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश निर्देशनालयमा समेत खटाउन सकिने ठाउँ छ ।
पहिला ठूला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू मोरङ, जनकपुर, रूपन्देही, नेपागन्ज, कैलाली, पोखरा, काठमाडौं र ललितपुरमा दरबन्दी थिए । ती कार्यालय खरेजीसँगै कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परे ।
त्यसैगरी हेल्थ एजुकेसन समूहका चारजना फाजिलमा छन् । जसमा बद्रीबहादुर खड्का, विनोदविन्दु शर्मा, डा. राधिका थपलिया र हालै सो समूहमा लोकसेवाबाट नाम निकालेका महेश्वर श्रेष्ठ छन् । यो समूहका दरबन्दी हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकमा मात्र छ । जहाँ सोही तहका सुनील शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । पूर्वसचिव पुष्पा चौधरीका विश्वासपात्र मानिने शर्मा एकसेएक काविल सहसमूहकालाई पन्छाएर जिम्मेवारीमा छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि यो समूहका दरबन्दी पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रमा थिए । पाँचवटा तालिमकेन्द्र खारेजीमा परेसँगै सिंगो समूहका अधिकृतहरू फाजिलमा परेका हुन् । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन पाँच तालिमकेन्द्र ब्युँतिए मात्रै सबैको व्यवस्थापन सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रदेश निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकामध्ये डा. यादव जहेस समूहका हुन् । उनकै समूह मिल्ने १८ भन्दा बढी अस्पतालमा ११औँ तहकै दरवन्दी छ । घिमिरे र गिरी एकीकृत चिकित्सा समूहका हुन् । उनको पद रहेको भेक्टर वर्न डिजिज कन्ट्रोल निर्देशनालयमा पनि पदसमूह नमिल्ने व्यक्तिलाई राखिएको छ । मेसु समूहका डा. पौडेल मुद्दा चल्नासाथ निलम्बनमा पर्ने हुनाले सो पद रिक्त हुन्छ । उनको दरबन्दी प्रतिष्ठानमा छ ।
अहिलेकै संरचनामा पाँच प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा यी दुवै समूहका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन मिल्छ । निर्देशनालयहरूमा हेल्थ एजुकेसन, हेल्थ इन्स्पेक्सन, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका जनशक्ति खटाउन सकिन्छ । तर, समग्रमा हेर्दा पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका जनस्वास्थ्यविद्चि/कित्सकको जनशक्ति केन्द्रका महाशाखाहरूमै अपर्याप्त छ । हाल प्रदेश ७ मा मात्रै पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका प्रदेश निर्देशक छन् । त्यसबाहेक प्रदेश १ मा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहका भोगेन्द्र डोटेल र प्रदेश ६ मा रीता भण्डारीको मात्रै पदसमूह मिल्छ । प्रदेश २ का निर्देशक डा. प्रमोद यादव, प्रदेश ३ का डा. यदुचन्द्र घिमिरे, प्रदेश ४ डा. तारा पौडेल (हाल अख्तियार हिरासतमा), प्रदेश ५ का विनोद गिरीको पनि पदसमूहअनुसार पदस्थापन गर्न मिल्दैन । यस आधारमा मन्त्रालयमा फाजिलमा परेकामध्ये चारजनालाई प्रदेशमा पठाउन सकिने ठाउँ छ ।
पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसनको खडेरी
एमबिबिएस पढेर जनस्वास्थ्य विषय पढेका चिकित्सकहरूको समूह पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसनको मन्त्रालय, प्रदेश र विभागमा समेत थुप्रै दरबन्दी भए पनि यो समूहमा जनशक्तिको खडेरी हुँदा समूह नमिल्नेहरूले नेतृत्व पाइरहेका छन् ।
यो समूहका केही चिकित्सक मात्रै अहिले केन्द्र र महाशाखामा नेतृत्वका लागि योग्य छन् । जसमा सुदूरपश्चिमा डा. गुणराज अवस्थी, डा. अनुज भट्टचन्द छन् । यो समूहमा जनशक्तिको खडेरी भएकै कारण इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखामा एक वर्षअघि मात्रै ११औँ तहमा बढुवा भएका डा. विवेक लालले निर्देशक पाएका छन् । अवस्थी सुदूरपश्चिममै रमाइरहेका छन् । उनी केन्द्र आउनै खोज्दैनन् भने हालै लोकसेवा पास गरेका डा. भट्टचन्दलाई तत्कालीन सचिव डा. पुष्पा चौधरीले एकीकृत चिकित्साको दरबन्दीमा राखिदिएकी छिन् । नियमतः उनको पदसमूहका चिकित्सकहरूले मन्त्रालय तथा विभागका महत्वपूर्ण महाशाखामा पोस्टिङ हुनुपर्छ ।
यतिसम्मकी एक वर्षअघि मात्रै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. उपाध्यायको दरबन्दी सिन्धुली अस्पतालमा छ । सत्तासँग नजिक भएकै कारण उनले क्षेत्रीय निर्देशक र स्वास्थ्य बिमाको निर्देशकसमेत बन्ने अवसर पाए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा नयाँ निर्देशक आए पनि उनी दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किएका छैनन् ।
अहिले स्वास्थ्यसेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा डा. आरपी बिच्छा, नीति–योजना महाशाखामा डा. विकास देवकोटा र एचआइभी एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका डा. तारा पोखरेलको सेवासमूहअनुसारको जिम्मेवारी मिल्दैन । बिच्छा बालरोग विशेषज्ञ र डा. देवकोटा र पोखरेल जहेस समूहका हुन् । ती समूहमा पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका चिकित्सक हुनुपर्ने हो । तर, ती पदका लागि समूहअनुसार जिम्मेवारी दिने हो भने भट्टचन्द र डा. अवस्थी मात्रै योग्य छन् । हेल्थ इन्स्पेक्सन र हेल्थ एजुकेसन समूहका अधिकारीहरू भने कम्तीमा जनस्वास्थ्य पढेका नाताले पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन समूहका चिकित्सक नुहँदा महाशाखाहरू आफूले पाउँनुपर्ने दाबी गर्छन् ।
जो नियतवश फाजिलमा पारिएका छन्
मन्त्रालयमा फाजिलको सूचीमा डा. रमेश खरेल र डा. मदन उपाध्यायको नाम पनि आउने गरेको छ । दुवै जहेस (मेसु) समूहका चिकित्सक हुन् । उनीहरूको समूहलाई पोस्टिङ गर्न मिल्ने १८ वटा अस्पताल मेसुविहीन छन् । उनीहरूलाई पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी हो । तर, मन्त्रालयले खटाउन सकेको छैन । यतिसम्मकी एक वर्षअघि मात्रै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. उपाध्यायको दरबन्दी सिन्धुली अस्पतालमा छ । सत्तासँग नजिक भएकै कारण उनले क्षेत्रीय निर्देशक र स्वास्थ्य बिमाको निर्देशकसमेत बन्ने अवसर पाए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामा नयाँ निर्देशक आए पनि उनी दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किएका छैनन् ।
Tags: डा.विकास लामिछाने, पब्लिक हेल्थ एड्मिनिस्ट्रेसन, स्वास्थ्य मन्त्रालय
2 thoughts on “पद मिल्नेलाई जिम्मेवारी छैन, जिम्मेवारी छ समूह मिल्दैन”
याम बराव says:
अरु तल्लो तहकाको बिवरण कहिले आउछ ।
Kalika dhakal says:
Ahw6th ko ni labal anusar ko ka6ta jimbabari????
LeaveaReply to Kalika dhakal Cancel reply